lundi, 24 février 2020 22:36
Betsimisotra- Fandriana: Naolany ilay zazavavy, avy eo nokendainy ho faty
Tovolahy iray 23 taona no nahavanon-doza tao amin’ny Kaominina Betsimisotra Distrikan’i Fandriana faritra Amoron’i Mania. Zazavavy kely, 14 taona, no niharan’ny herisetra ara-nofo ny marainan’ny alahady 23 febroary 2020. Sendra irery tao an-trano io zazavavy io no niditra ilay tovolahy. Nisy nahita ny nidiran’ity farany, saingy tsy nisy nanampo na inona na inona satria fianakaviana avy amin’ny renin’ilay zazavavy ihany ity tovolahy ity. Ny loza anefa dia ilay tovovavy efa tsy nisy aina intsony, voatampim-bava ary mifatotra tongotra aman-tanana efa tsy nisy aina teo ambony fandriana no hitan’ny olona. Maty nokendaina ilay zazavavy rehefa avy naolana. Voasambotra ny androtr’io ihany ilay tovolahy, ary nentin’ny Zandary nakao Fandriana renivohitra androany, nanohizana ny famotorana. Rahampitso talata no hatolotra ny fampanoavana eny amin’ny Fitsarana ambaratonga voalohany Ambositra ny raharaha.
dimanche, 23 février 2020 17:41
Kidnapping: Na maty, na voasambotra dia migadra mandra-pahafatiny ireo mpaka an-keriny
Misy ny Sampan-draharaha iadiana amin'ny fakàna an-keriny na ny "Brigade anti-kidnapping (BAK)" eo anivon’ny zandarimariam-pirenena. Manana birao manokana etsy amin’ny toby « Jeneraly Richard Ratsimandrava » ny BAK. Notokanana ny 21 febroary 2020 ny trano fiasany. Nilaza ny Jeneraly Richard Ravalomanana, Sekreteram-panjakana misahana ny zandarimariam-pirenena (SEG) fa ity "BAK" dia toy ny "Centre opérationnel stratégique" manangona ny vaovao rehetra sy manao ny fandalinana ary manome toromarika amin'ny asan'ireo mpanao famotorana miantsehatra. Tsy hianona amin’ny fanenjehana fotsiny ny asa ho atao, hoy izy, fa hanao ny fisorohana, ny fandinihina mahakasika ireo trangan-javatra ireo, ary ahafahana manao hetsika haingana indindra raha misy tranga fakana an-keriny.
samedi, 22 février 2020 22:28
RN1 bis Maintirano – Tsiroanomandidy: Kamiao roa tra-tehaka nitondra hazo voarara
Miitatra amin’iny faritra Melaky iny ny fanimbana ala sy hazo sarobidy. Kamiao roa no saron’ny Zandary tamin’ny lalam-pirenena Voalohany Bis (RN1 bis), ny alin’ny 18 febroary 2020, nitondra hazo sarobidy efa voatsofa hanana endrika « madrier ». Ny iray nahitana « madrier » miisa 40, ny faharoa nahitana 41. Nalaina tao Ihorimbato fokontany, Kaominina Beravina, Distrikan’i Morafenobe ireto hazo ireto. Nogiazana ao amin’ny toeram-pamonjana fiara avy hatrany moa ireto kamiao ireto, izay vehivavy ao Tsiroanomandidy no voalaza fa tompony. Voararan’ny lalàna ny mitrandraka ireto karazan-kazo tratra ireto. Nanokatra fanadihadiana ny Zandary hamantarana ireo miray tendro amin’izao raharaha izao. (Jereo Sary Tohiny)
vendredi, 21 février 2020 11:58
Sambava: Mody nangata-bady kanjo nanapoizina sy nandroba izay saika ho rafozan-dahiny
Natolotra ny Fitsarana omaly 20 febroary 2020 ny tovolahy iray, izay tonga mba hangata-bady tamina fianakaviana iray tao Amboangibe Bemarivo, kinanjo nanampoizina ny tokantran’ilay vehivavy nokasainy hampakariny tamin'ny alalany zava-pisotro nasiana fanafody mampatory « valium » izany, dia avy eo norobaina ny lavanila milanja any amin'ny 300kg tao an-trano. Herintaona taorian'ny nanaovany izany zava-doza izany izao vao voasambotra ny 13 febroary 2020. Nanohy ny fikarohana ny Polisim-pirenena ka voasambotra omaly ireo mpividy io lavanila halatra io, miisa roa izy ireo.
jeudi, 20 février 2020 14:40
Rwanda: Nesorin’i Paul Kagame ny minisitry ny fahasalamana Diane Gashumba fa nanao tsirambina ny « coronavirus »
Hatreto dia tsy mbola misy tranga « coronavirus » any Rwanda. Na izany aza, nesorin’ny filoha Paul Kagame avy hatrany tamin’ny asany ny minisitry ny fahasalama Diane Gashumba noho ity farany « nandainga » sy nanao tsirambina ity valanaretina ity, satria tsy ampy akory ireo fitaovana fitiliana ananan’i Rwanda amin’ny fisorohana tokony hatao. Nanomboka ny taona 2016 i Diane Gashumba no nisahana ny ministeran’ny fahasalamana tao Rwanda. Maherin’ny 2 100 izao ny olona matin’ny coronavirus any Chine hatramin'ity androany ity. Nisy roa hafa maty tany Iran, roa koa tany Hong Kong, ary roa hafa mpizahatany japoney, isan’ireo narahimaso ara-pahasalamana tao anatin’ilay sambobe « Diamond Princess ». (Jereo Sary Tohiny)
Mahanoro: Tsy nisy fiovana ny vidin’ny entana
Na teo aza ny takaitra tao aorian’ny fandalovan’ny andro ratsy Francisco taty amin’ny Distrikan’i Mahanoro, dia tsy nisy fiovana ny vidin’ny entana ilain’ny mponina andavanandro hita eny an-tsena, fa mitovy hatrany : ny vary 450 hatramin’ny 500 Ariary ny kapoaka, ny menaka 4 400 Ariary ny litatra, ny siramamy 2 400 Ariary ny kilao ary ny lafarina 2 000 Ariary ny kilao. Nambaran’ireo mpivarotra ambongadiny teto Mahanoro fa tsy atahorana ny fisian’ny tsy fahampian’ny entana ilaina maika aty an-toerana. Nidina taty Mahanoro ny solontenan’ny ministeran’ny indostria sy ny varotra ary ny asatanana izay notarihin’ny Talen’ny Varotra Anatiny, niaraka tamin’ny Talem-paritra nijery ifotony ny fivoaran’ny vidin’ny entana ilaina maika aty an-toerana tao aorian’ny fandalovan’ny andro ratsy Francisco. (Jereo Sary Tohiny)
mercredi, 19 février 2020 15:53
Sambava: Mizana mitongilana maro no sarona
Nanao be midina tao amin'ny tsena Antanifotsy Sambava ny avy amin'ny sampandraharahan’ny Indostria sy ny varotra ary ny Asa tanana tato amin'ny Faritra SAVA omaly 18 febroary 2020. Nisava ireo mizana izay maro no hita fa tsy niatrika fitsarana, hany ka lasa mizana mitongilina mamono antoka ny mpanjifa no tazana. Noraofina avokoa ary nentina any amin’ny birao mba hahafahana manamboatra azy. Nisy ihany ireo izay mba nandray anjara tamin’ny fitsarana ny mizana saingy rehefa mivarotra izy dia ilay tsy vita fitsarana no ampiasainy, ary tao kosa ireo izay nitsoaka fotsiny izao. Mitaraina ny mpajifa fa tsy vitany vidin-javatra miakatra fa mbola voafitaka amin’ireo mizana mitongilana ka nidera izao fisavana izao. Voasazy handoa 10 000Ar ny « droit » ary manomboka eo amin ny 100 000Ar kosa ny fanamboarana isaky ny mizana tsy manaraka ny fenitra na tsy vita fitsarana. (Jereo Sary Tohiny)
mercredi, 19 février 2020 13:18
Sary: Tinasoa Clara
Ambongo – Ifanadiana: Fiara 4x4 nifatratra tany an-tranon’olona, raim-pianakaviana iray naratra
Feo nidoboka mafy no nanaitra ny manodidina teo Ambongo, manaraka ny lalam-pirenena faha-25, androany tokony ho tamin’ny 7ora sy sasany maraina. Fiara 4x4 nitondra vazaha no nifatratra tany an-tranon’olona teo amoron-dalana no hita nony avy eo. Niala lalana ilay fiara, avy eo nifaoka trano telo, ka tao amin’ny fahatelo vao tafajanona. Raim-pianakaviana saika hivoaka hanavotr’aina vao naheno feo hafahafa nandritra ilay fiara nifaoka ny trano voalohany no voadona ary naratra mafy. Nifitsaka teo amin’ny zoron-trano ramatoa vadiny sy ny zanak’izy ireo vao herintaona tavela tao an-trano, ary nieren-doza. Tsy nisy aina nafoy. Nentina namonjy hopitaly ny naratra. (Jereo Sary Tohiny)
mardi, 18 février 2020 22:02
Fianarantsoa: Tovovavy iray tra-tehaka nitondra sokatra 37 avy any Toliara
Nandritra ny fisavana fiara natoan’ny Polisy teo amin’ny sakana eo Ankidona, tanàna isany maresaka manaraka ny lalam-pirenena faha-7 raha hivoaka ny tanànan’i Fianarantsoa, no tra-tehaka ity tovovavy nitondra sokatra miisa 37 ity. Nandeha taksiborosy avy any Toliara izy ary nikasa hitondra ny entana ho any Antananarivo no izao tratra izao. Hatolotra ny Fitsarana eto Fianarantsoa ilay tovovavy aorian'ny fanadihadiana ataon'ny Polisy azy. Voasokajy ho biby arovana ny sokatra, noho izy ireo ahiana ho lany tamingana. Enjehin’ny lalàna ny fitondrana na fivarotana na famonoana azy ireny. (Jereo Sary Tohiny)
mardi, 18 février 2020 20:43
Ambilobe: Voasambotra ary nentina fiaramanidina aty Antananarivo i « Body Mena » ilay namono vehivavy bevohoka
Jiolahy mpamerin-keloka i Body Mena. Vono olona no efa nisamborana azy ka nidirany am-ponja tamin’ny taona 2013 tany Nosy Be, tao Ambilobe ny 2017 sy ny taona 2018. Niampy fanolanana tamin’ity tranga farany ity. Votsotra hatrany ity lehilahy ity na efa nakarina teto Antananarivo aza tamin’ireo heloka bevava vitany. Mbola ity Body Mena ity ihany no ahiahiana voalohany ho tompon'antoka tamin’ny famonoana ho faty an-dRazafimalala Brigitte, 35 taona, izay nitondra vohoka fito volana. Tsy hita nanomboka ny 03 febroary 2020 ity vehivavy ity. Vatana mangatsiaka efa andalam-pahasimbana no nahitana azy ny faran’ny herinandro lasa teo. Nifanome tanana ny mpitandro ny filaminana mba hikarohana izay nahavanon-doza ka voasambotra tao Antanambao, Kaominina ambanivohitra Mantaly, Disitrika Ambilobe i Body Mena.